Andriatsarafara Rakotondrazaka : Tontosa ny fifamindram-pibaikoana -
AccueilRaharaham-pirenenaAndriatsarafara Rakotondrazaka : Tontosa ny fifamindram-pibaikoana
19/04/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Notontosaina omaly teny amin’ny kianja monisipaly Mahamasina ny lanonana lehibe ara-miaramila, izay niompana tanteraka tamin’ny famindram-pibakoina arak’asa. Izany lanonana izany dia notronin’ireo manam-boninahitra, izay notarihin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ireo olo-manan-kaja isan-tsokajiny avy eo anivon’ny zandarimariam-pirenena sy ny sekereteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena ary ny minisitry ny Fiarovana. Araka izany dia fifandimbiasam-pibakoana maro sosona no navoitra tao. Nomarihina ampahibemaso teny ny fanolorana am-pahibemaso kaomandin’ny fari-piadidian’ny zandarimariam-pirenena vaovao jeneraly Rakotondrazaka Andriantsarafara Andriamitovy, izay vao notendrena handray ny asa maha-mpitarika sy lehiben’ny fibaikoana azy ny alatsinainy lasa teo rehefa nisolo ny toeran’ny jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa. Fantatra fa voatendry hanatanteraka ny asa hafa toa ny fandraisana ny toerana vaovao eny amin’ny toby indray ny jeneraly Ramiandrisoa Jean de Dieu, izao nodimbiasany izao. ity ihany koa no manam-boninahitra nitana andraikitra faha-19 teo amin’ity toerana nahavoatendry azy ho mpitarika ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena ny CIRGN Antananarivo. Nohantintranterina tao an-toerana nandritry ireo fanehoana ambany faneva tamin’izany fa hanatsarana ny fomba fiasa ny fiovan’ny lehibe mibaiko. Natao tao ihany koa ny fanendrena ny kaomandin’ny sekoly sy ny fampiofanana taorian’izay, ka nodimbiasin’ny jeneraly Andriamanana Solofonirina Maherizo ny toeran’ny mpitarika izany teo aloha i Jeneraly Rakotomahanina Harimanantsoa Florens. Nizotra am-pilaminana heni-kaja sy heni-boninahitra noho izany ny ity fifandimbiasan-toerana am-pahibemaso natao teny Mahamasina ity, ary nolazainy tao ihany koa fa ity olom-boatendry ity no fahadimy nitana io andraikitra maha mpitarika eo anivon’ny kaomandin’ny sekoly.
Izany dia nofaranana tamin’ny fanolorana ny sabatra fibaikoana teo amin’ny olom-pirenena vaovao voatendry, narahina ny fanolorana an’i kolonely Randrianarivelo Anicet, izay hisahana indray ny vondron-toby eto Analamanga raha voatendry hisahana andraikitra hafa eto amin’ny firenena kosa ny kolonely Ravoavy Zafisambatra. Nandritra izany dia mbola nanamafy sy nanentana ireo mpitandro filaminana rehetra ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena teo aloha tamin’ny fanambarana nataony, fa ilaina ny fiaraha-mientana hampandriana fahalemana ny firenena, ary tokony hiara-hientana amin’izy ireo ihany koa ny vahoaka. Nambarany tamin’izany ihany koa fa mandalo fotoan-tsarotra ny firenena ka tena ilaina ny fandraisana andraikitra. Vonona hiantsoroka adidy feno, indrindra eo amin’ny fanamafisana ny paikady ihany koa ny jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa nandritry ny fandraisam-pitenenana fohy tamin’ny fandraisany ny andraikitra vaovao sahaniny tetsy amin’ny« Cercle Mess mixte Fort Duchesne omaly. Hatao laharam-pahamehana hatrany ny fifehezana ireo tafika tarihina mba tsy hisian’ny fihoaram-pefy, izay mbola naverina hatrany fa hiezaka hanohy sy hanatsara ny zavatra efa vita teo aloha, ary hanatanteraka ny adidy napetraka taminy, izay tsy eto Antananarivo ihany no hanatanterahana izany asa izany fa hipaka hatrany amin’ny faritra hafa ihany koa.
Nifarana omaly, tany Addis-Abeba, Ethiopie ny fihaonana an-tampon’ny vondrona Afrikanina. Maro ny zavatra tapaka nandritra ity roa andro ity, toa ny nahavoafidy ny Filoha Guineanina Alpha Condé, ho filoha vaovao hitantanana ny vondrona. Teo koa ...Tohiny